Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday oo Dacwad laga gudbiyey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday oo Dacwad laga gudbiyey
Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday oo Dacwad laga gudbiyey
Afhayeenka Midowga Musharixiinta mucaaradka Musharax Daahir Maxamuud Geelle oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday musharaxiinta uu ahaa isku day dhameestiran oo la doonayay in lagu dilo.
Waxa uu sheegay Daahir Geelle in rasaastii habeen hore ciidamada dowlada ku fureen Hotelka Maa’ida la doonayay in lagu dilo Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo hoteelkaasi degnaa.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in rasaastii shalay subax lagu furay musharaxiin uu kamid ahaa Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya uu ahaa shirqool kale oo iyana la doonayay in ciidamadada dowlada ku dilaan musharaxiinta qaarkood .
Daahir Gelle ayaama cadeeyay amarka lagu qaarijin lahaa Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo Mudsharaxiinta kale uu bixiyay Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo.
Musharax Daahir Geelle ayaa sheegay in ay diyaarinayaan dacwad ka dhan ah Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo uu sheegay in isagu bixiyay amarka lagu weeraray Musharaxiinta laguna hor joogsaday banaan baxa nabadeed.
Dowlada uu hogaamiyo Farmaajo ayaa shalay awood u adeegsatay joojinta banaan bax ay qorsheenayeen musharaxiinta mucaaradka in ay ka dhigaan Daljirka Dahsoon, waxa ayna ciidamada rasaas ku fureen banaan bax ay hogaamiyeen qaar kamid ah Musharaxiinta.
Previous articleDowlada Turkiga oo loo gudbiyey cabashada Taangiyada ay Soomaaliya siiyeen shacab lagu xasuuqay
Next articleMaamulada Puntland iyo Jubbland oo labaxat Gudigii Baydhabo
Madaxweynayaasha Faransiiska iyo Turkiga oo Qadka Taleefanka ku wada hadlay Mudo kadib.
Dowlada Kmg oo ogolaatay in Midoowga Musharxiinta Banaanbax ku dhigtaan Taalada Daljirka Dahsoon
Itoobiya oo diiday soo jeedinta Suudaan ee ku aaddan wadahadallada seddex Geesoodka ah ee ku saabsan biya-xireenka
Testosterone boosting drugs increase your free testosterone levels, increase your drive and energy and increase your masculinity due to natural functioning with age. In...
.. Taliyaha Booliska Soomaaliya Jen. Xijaar oo Taliyihii 2 ka...
Dowlad Deegaanka Soomaalida oo war kasoo saaray imtixaanka dugsiyada sare
Wasiirka amniga Soomaaliya oo Weerarkii xalay dusha u saaray Mucaaradka..
Midoowga Musharaxiinta oo mar kale war culus soo saaray
Itoobiya oo diiday soo jeedinta Suudaan ee ku aaddan wadahadallada seddex...
Sheekh Maxamed Idiris oo ku tilmaamay Madaxweynaha watigiisa dhamaaday Farmaajo mid...